Soo dejisan PlayStation 2.55.8 – Vessoft
Games, Helitaanka Remote
Soo dejisan PlayStation
PlayStation – software ah si ay u helaan astaamaha network ee ciyaaraha konsol ka Sony Corporation ka. Playstation u isticmaalaa in user a si caddeeynta oo bixiya gacanta fog ka badan Console oo u ogolaanaya in ay soo dejiyo wax kala duwan ee iibka internetka. Barnaamijka wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u aragto liiska guulaha, sarrifka ee fariimaha, u hesho wararkii ugu dambeeyay iyo u eegto gawaarida ciyaarta. Playstation sidoo kale waxaa ku jira qaybo kaas oo awood si uu u daawado gameplay ee kulan Console ka adeegga caanka ah dhifasho ah. Playstation kuu ogolaanayaa inaad Customize gaadhsiin, qoraalka size iyo animation saamaynta.
Control Remote ah dajinta ee kulan
U qor dadka kale ee
Isticmaalaa qalabka sida screen labaad ee Console
Views wararka iyo gawaarida ee kulan
Jiritaanka qaybta abaalgudyo iyo guulaha
PlayStation Software la xiriira: